Madaxweynaha Mareykanka oo muddo dheer kadib safiir usoo magacaabay Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama shalay oo salaaso aheyd magacaabay safiirka cusub ee Soomaaliya u qaabilsanaan doona Mareykanka, kadib 25 sano kadib oo uusan jirin safiir Soomaaliya u qaabilsanaa Soomaaliya, sidaas waxaa qortay New York Times.
Obama ayaa danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya u magacaabay haweeney lagu magacaabo, Katherine Simonds Dhanani, oo fadhigeedu noqon doono dalka Soomaaliya deriska la ah ee Kenya, inta sida la yiri ay si wanaagsan uga soo hagaageyso xaaladda amaan ee caasimadda Soomaaliya.
Dhanani oo hadda ah agaasimaha arrimaha ammaanka iyo gobolka ee xafiiska Africa ee waaxda arrimaha dibedda Mareykanka ayaa horay uga soo shaqeysay dalalka India, Mexico, Guyana, Zimbabwe, Gabon, Zambia, Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo iyo Jamhuuriyadda Congo.
Wasaraadda arrimaha debadda Mareykanka ayaa ayaa magacaabista danjirahan cusub ku tilmaantay mid muujineysa sida ay Mareykanka uga go’antahay wax ka qabashada arrimaha Soomaaliya.
“Waa magacaabis taariikh ah oo muujineysa xiriirka qotada dheer ee u dhaxeya Soomaaliya iyo Mareykanka” sidaas waxaa yiri Jen Psaki, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka.
“Waxa ay tani noo ogolaneysaa inay xusno horumarka ay dadka Soomaaliyeed ka sameynayaan kasoo kabsashada in ka badan labaatan sano oo colaad ah, Soomaaliya waxaa horyaala shaqo tixgelin mudan si ay u dhameystirto kalaguurka, una gudubto jawi nabadeed, dimuquraadi ah, islamarkaana barwaaqo ah”, sidaa waxaa yiri Jen Psak.
Bishii July ee sanadkii 2014 ayaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud Ra’iisul wasaaraha xilligaan Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke u magacaabay inuu noqdo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, waxaana waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay madaxweyne Barack Obama.
Beesha Caalamka: Lama qaadan karo dhibaatada colaada Guriceel